Alarobia, 04 Febroary 2015 by Delta Engineering
Fampiharana ny vokatra 1C avo be
Io fametrahana io dia mifanentana amin'ny fatra ary mampihatra vokatra 1-na lozisialy avo miaraka miaraka amina accelerator (max 1.3%). Io accelerator dia ampiana hampiakatra ny hafainganam-pandeha fanasitranana ny fitrandrahana amin'ny fomba iray ahafahan'ny vokatra mifamatotra azo zahana kokoa aorian'ny segondra vitsy. Ny accelerator dia azo ampiana amin'ny teboka sasany na mandritra ny fanilihana manontolo.
Ny fitrandrahana habetsaky ny accelerator kely dia fisaorana betsaka noho ny rafitra fandrafetana doka ho antsika manokana. Arakaraka ny isa, ny akora dia afaka mamahana ny cartridges, poketra na paile.
Published in 2-singa rafitra
Torohevitra maimaim-poana na automatique amin'ny làlam-pandrefesana manintona ambany / mafana
Ny tontolon'ny DBM dia novolavolaina mba hikarakarana ny menaka mafana mahazatra sy ny làlam-pandehanana mavitrika mihena / mafana mahomby miaraka amin'ny fepetra ilaina.
Published in Manual, mandeha ho azy
Ny DHA100 dia namboarina manokana hampihatra lakaoly 1-haingam-pandeha avo ho an'ireo mihazona. Ny mpihazona dia singa plastika izay napetraka hatramin'ny farany ambany amin'ny varavarankely fiara an'ny sisin'ny herinaratra. Izy ireo dia mampifandray ny varavarankely amin'ny moto kely mahatonga ny fikandrana hiakatra ambony sy ambany.
Published in mandeha ho azy
Fampiharana ny vokatra vita amin'ny pasty na manjavozavo avo be
Ny DMC022 dia rafitra metering sy mifangaro ho an'ny vokatra 2-singa pasty na avo be. Ny milina dia namboarina ho an'ny dose, fanalalahana ary ny fampiharana ny vokatrao. Ny vokatra thixotropic koa dia azo votana miaraka amin'ny DMC022.
Kitiho raha mila fanazavana fanampiny.
Fampiharana ny vokatra ambany sy ambany viscous
Ny rafitra DMC202 dia namboarina ho an'ny fandrefesana sy ny fifangaroana ambany amin'ny haingam-pandeha ambany sy haingam-pandeha toy ny epoxies, polyurethanes, silicones, sns.
Ny fametrahana dia azo ampiasaina amin'ny fampiharana manual na mandeha ho azy ary manana safidy hafa. Rafitra maodely mifangaro arakaraka ny toetran'ny vokatra sy ny zavatra ilainao izy io.
Alakamisy, 14 May 2020 by CMS
Fiompiana hidy hidradrika
Ny DRU dia unit-pumping hydraulic ho an'ny vokatra avo be, novolavolain'ny Delta Application Technics. Mameno ny fepetra takian'ny fiarovana mba hiantohana ny tontolo iainana azo antoka ho an'ny mpandraharaha ataonao.
Fampiharana ny vokatra 1-singa pasty
Ny rafi-pandrefesana tsotra mba hampiharana vokatra avo be izay omena amin'ny paosy 20 l na 200 amponga. Misy ny làlan-droa pneumatic roa, paompy piston / shovel miasa miasa ary lovia mpanara-maso miaraka fanisy roa. Miankina amin'ny fampiharana sy ny fepetra ilaina, ny singa azo ampidirina toy ny mpanangona, mpandrindra ny tsindry ny vokatra,…
Ity basy ity dia novolavolaina ho an'ireo mpampiasa isan'andro ny carteaux aluminium mahazatra. Raha tsy lehibe ny fanjifana adhesive dia miova ho lay 20 L, ity basy ity no vahaolana mpanelanelana tonga lafatra.